Islaayidii kee keessati yoo dirree gulaaluu barbaadde, dirricha fili kana booda Dirreewwan - Gulaali filadhu.
Saagi - Dirreewwan Filadhu
Guyyaa ammaa gara islaayidiitti akka dirree siranaati saaga. Guyyaa ofumaa isaatin hin haaromsu.
Guyyaa ammaa gara islaayidii keetiitti akka dirree jijjiiramaati saagi. Yommuu faayiliicha deebistee feetuu guyyaa yeruuma sanitti haaromsa.
Yeroo ammaa gara islaayidii keetitti akka dirree sirnaati saaga. Yeroon kuni hoguma sanati haarommasa.
Yeroo ammaa gara islaayidii keetiitti akka dirree jijjiiramaati saagi. Yommuu faayiliicha debistee fetuu baan yeruuma saniti haarommamaa.
Maqoota duuraa fi maayyii deetaa fayyadama LibreOffice keessaa tarreeeffama islaayidii ka'aatti saaga.
Maqicha faayilicha ka'aa saagi. Erga filicha olkeessee booda maqich qofaatuu mul'ata.